Madaxtooyadda oo ka Warbixisay Dedaallada Lagu Samato-bixinayo Dadka Abaartu Tabaalleysay | Wajaale.com
12 November 2016 | News
Madaxtooyadda oo ka Warbixisay Dedaallada Lagu Samato-bixinayo Dadka Abaartu Tabaalleysay
Madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa ka hadashay dedaallo badan oo la iskugu dubo ridayo qorshaha qaran ee lagu samato-bixinayo in ka badan hal malyan oo qof oo ku dhaqan gobollada bariga gaar ahaan Togdheer, Buuhoodle, Sool iyo Sanaag oo abaaruhu ay halis geliyeen noloshoodii.
Sidaasna waxa sheegay Afhayeenka madaxtooyadda Somaliland, Eng. Xuseen Aadan Cigge (Xuseen Deyr) isla markaana xubin ka ah Guddida taakuleynta abaaraha ee heer qaran oo xalay u waramayay wargeyska DAWAN.
Eng. Xuseen Aadan Cigge waxa uu ugu horeyn ka hadlay barnaamij xalay ka baxay muuq-baahiyaha qaranka oo Telefishanada kale ee dalka ka hawl galaanna ay kaalin ku lahaayeen oo deeq loogu ururinayay dadka abaaruhu naafeeyeen, waxaannu yidhi, “Guddida oo ka kooban xukuumada, culimada & ganacsatada Qaranka ee taakulaynta abaaraha waxay caawa (xalay) ka qayb-galeen barnaamij tabarucaad iyo deeq loogu ururinayay dadka reer Somaliland ee abaaraha ku tabaaloobay, gaar ahaan Gobollada bari ee dalka.
Barnaamijkan oo ahaa mid si toos ah uga baxayey TV-ga waxa qaban-qaabisay Wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta, gaar ahaan TV-ga Qaranka iyo Telefishannada kale madaxa bannaan ee ka hawl-gala JSL.Ujeedada barnaamijkani waxay ahayd in ummadda JSL, gudaha iyo dibedda lagu beraarujiyo sidii ay gurmad iyo gar-gaar ugu fidin lahaayeen dadkooda tabaalaysan.
Madaxweynaha JSL Mudane Axmed Siilaanyo isuga oo dadkiisa ay abaaruhu tabaaleeyeen la wadaagaya dareenka xanuunka leh iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan wuxuu maalmihii ugu dambeeyey kulano is-daba joog ah la lahaa Hay’adaha Qaranka, Culimada, iyo Ganacsatada si loo agaasimo Gurmad Qaran oo Degdeg ah oo loogu gurmanayo dadkeenna tabaalaysan.”
“Xukuumaddu waxay diyaarisay qaadhaan bilow ah oo ay ugu tallo gashay wejigan hore ee abaaraha, kaasoo ahaa 1 milyan oo Dollar oo naqad ah iyo iloo nus malyuun Dollar oo laga goyn doono shaqaalaha Dawladda deeqahaasi waxay xukuumaddu ku wareejisay guddida qaran ee taakulaynta abaaraha. Sidoo kale Madaxweynuhu wuxuu Khamiistii (10/11/2016) kulan la yeeshay ganacsatadda waaweyn ee dalka kuwaasoo abaaraha ugu deeqay 1 milyan iyo 35 kun oo Dollar. Xukuumadda waxa ka go’an in intii itaalkeeda ah ay u gurmato dadkeenna, si kasta iyo qorshe kasta oo ummadda loogu gurmanayona ay horsed ka noqoto,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Afhayeen Xuseen Deyr waxa uu sheegay in madaxweynuhu xukuumadda faray in laga fikiro sidii loo abuuri lahaa qorshe lagaga gaashamanayo abaaraha dalka ku soo noqnoqday.“Madaxweynuhu cid kasta oo uu la kulmay wuxuu faray in la sameeyo qorshe qaran oo deg-deg ah oo haatan ummadda lagu badbaadinayo iyo mid mustaqbalka lagaga gaashaamanayo abaarahan dadkeenna iyo dalkeenaba ku soo noq-noqday.Sidoo kale, Madaxweynuhu wuxuu baaq iiyo codsi gurmad u kala diray wadamada Carabta, Islaamka, ururrada qaadhaan-bixiyeyaasha , UN-ta, UK, EU & USA, si JSL looga gargaaro ee waxyeellada abaartu u geysatay degaankii, duunyadii iyo dadkiiba. Taasi oo saameyn taban ku yeelatay in ka badan hal malyan oo ku kala dhaqan Togdheer, Sool iyo Sanaag,”ayuu yidhi Afhayeenku.
Sidoo kalena, madaxtooyaddu waxay soo bandhigtay 7 shirkadood oo maxali ahi oo gurmadka abaaraha ugu yaboohay lacag dhan Hal milyan iyo shan iyo sodon kun oo doolar ( 1. 035.000$). Ka dib kulan uu madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) la yeeshay ganacsatadda dalka Khamiistii la soo dhaafay, kuwaas oo magacyooadu ahaayeen sidan hoos ku xusan:-
1. Shirkada Dahabshiil Group waxay bixisay laba boqol oo kun oo doolar (200.000$)
2. Shirkada TELESOM waxay bixisay Boqol iyo konton kun oo doolar (150.000$) oo laba qaybood ah. Sideetan kun 80. 000 $ oo ay guddida ku wareejinayso iyo todobaatan kun (70.000$) oo ay gobolada kaga yabooheen.
3.Shirkada OOMAR waxa ay ku yabooday raashin dhan afar kun oo qoys oo gaahaysa laba boqol oo kun oo doolar (200.000$).
4. Shirkada Somcable waxay ku yaboohday laba boqol oo kun oo doolar (200.000$) oo kaash ah.
5. Xaaji Baxsane (Red Sea company) wuxuu ku yaboohay kontan kun oo doolar ( 50. 000$).
6. Shirkada Al Harbi waxay ku yaboohday Sideetan kun oo doolar (80. 000$), oo isugu jira soddon kun (30. 000$) oo doolar oo kaash ah Iyo konton kun (50. 000$) oo raashin ah.
7. Shirkada Haamaha kaydka Shidaalka Berbera (BOG) waxay ku yabooheen Boqol iyo konton kun oo doolar (150.000$).
Waxa kale oo kun doolar(1.000$) bixiyey Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen oo shirka ku sugnaa.